Ubuntu Cinnamon 21.10 yeza neCinnamon 4.8.6 kunye neLinux 5.13 | Ubunlog
Ubuntu Cinnamon 21.10 yeza neCinnamon 4.8.6 kunye nokugcina ingxelo ye-DEB yeFirefox
IPablinux | 15/10/2021 10:32 | Ukuhlaziywa ukuba 15/10/2021 12:24 | Ulwabiwo olusekwe kubuntu, Ubuntu
Ndiyifumana ilusizi ukuba iFirefox yenza iindaba kwezi ntsuku, kodwa yile nto iyiyo. Kwaye iMozilla kunye neCanonical, hayi ngokuchaseneyo, bagqibe kwelokuba licebo elilungileyo ukongeza ingxelo yeFirefox ngokungagqibekanga kwi Ubuntu 21.10. Zonke ezinye iincasa azifuneki ukuba zenze utshintsho, kodwa ziya kuba kwiinyanga ezintandathu. Ngesi sizathu, enye ye "izinto ezintsha" ezikhankanyiweyo zezinye iincasa ezisemthethweni nezingekho mthethweni, ezinje nge Ubuntu Cinnamon 21.10, kukuba bagcina ifomathi ye-DEB.
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba usapho lakwa-Ubuntu luya kukhula kwixesha elizayo. Okwangoku, kulandela ukubuyela kwe-Ubuntu kwi-GNOME kunye nokupheliswa kolo hlobo, kukho iincasa ezisibhozo ezisemthethweni. Kwixa elizayo, isinamon kulindeleke ukuba "ingene kwimenyu", kwaye iyakwenza oko ngaphambi okanye emva Ubuntu Ubunye kunye no-UbuntuDDE. Kananjalo usebenza kwiWebhu yeWebhu, eya kuba yindawo evulekileyo eyahlukileyo kwiChannel OS eya kuthi isekwe kwiFirefox. Imicimbi yosapho ecaleni, iindaba zanamhlanje zezokuba Ubuntu Cinnamon 21.10 ngoku iyafumaneka.
Amagqabantshintshi e-Ubuntu Cinnamon 21.10
Isinamoni 4.8.6. Bathi kufanele ukuba bakwi-5.0.5, kodwa khange ifike kwi-Debian Bullseye freeze ngexesha, ke oko kwenzeka kubo njengo-19.10 kwaye kwafuneka basebenzise imeko-bume efanayo nokukhululwa kokugqibela. Iindaba ezimnandi zezokuba kuvavanywa ngakumbi kwaye kunee-bugs ezimbalwa.
IFirefox 93 kuhlobo lwe-DEB. Njengakwezinye iincasa, baya kusebenzisa i-snap kwi-22.04.
Idesktop isebenzisa usetyenziso lwe-GNOME, kwaye kolu khululo kukho i-3.38, 40 / 40.1. Abathethi nto malunga neGNOME 41.
Inkxaso yeGTK4 kwiYaru-Cinnamon.
IPython 3.9, iRuby 2.7, i-PHP 8.0, iPerl 5.32.1, ingqokelela yekhomputha ye-GNU 11.2.0
UJoshua Peisach, inkokeli yeprojekthi, uthi nangona inguqulelo yeCinnamon isetyenziswa kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo, I-kernel kunye neephakeji ezithile ezinokuhlaziywa intsha njengendawo yokugqibela. Ndingongeza enye into: i-21.04 yayikukhululwa komjikelo oqhelekileyo, kwaye ukuba asihlaziyi ngoku ngo-Okthobha kuya kufuneka siyenze ngoJanuwari; Ayizukuhlala kude kube yi-22.04, ke kungcono ukuyihlaziya ngoku, ufumane yonke into entsha, kwaye ulibale ngayo.
Umfanekiso we-Ubuntu Cinnamon 21.10 ISO uyafumaneka kwi esi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Ubuntu Cinnamon 21.10 yeza neCinnamon 4.8.6 kunye nokugcina ingxelo ye-DEB yeFirefox